4 Siyaabaha Istiraatiijiga ah ee lagu hagaajinayo Mawduucaaga Muuqaal ee 2020 | Martech Zone
4 Siyaabaha Istaraatiijiga ah ee lagu hagaajinayo Mawduucaaga Muuqaalka sannadka 2020
Isniin, February 24, 2020 Isniin, February 24, 2020 Shane Barker
2018 arkay 80% suuqyada U adeegso waxyaabaha ku jira muuqaalka xeeladahooda warbaahinta bulshada. Sidoo kale, adeegsiga fiidiyowyada ayaa ku soo kordhay ku dhowaad 57% intii u dhaxeysay 2017 iyo 2018.
Waxaan hadda galnay xilli ay isticmaaleyaashu rabaan nuxur rafcaan leh, oo ay si deg deg ah u doonayaan. Intaa waxaa sii dheer in taasi suurto gal tahay, waa kuwan sababta ay tahay inaad u sameyso isticmaal waxyaabo muuqaal ah:
Way fududahay share
Si fudud xusuuso
Madadaalo iyo mashquul
Way cadahay inaad ubaahantahay inaad kor uqaado ciyaarta suuqgeynta muuqaalka ah. Si aan kaaga caawiyo, waxaan soo uruuriyay xeelado dhowr ah oo aad hirgelin karto si aad ugu horumariso waxyaabahaaga muuqaalka ah sanadka 2020.
Istaraatiijiyadda # 1: Lahaanshaha Awooda Xogta
Infographics waa sawirro ka kooban macluumaad badan oo waxtar leh. Waxay kaa caawinayaan inaad u soo bandhigto macluumaadkaaga qaab soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh oo loogu talagalay dhagaystayaashaada.
Waxay u adeegaan qaab aad u wanaagsan oo loogu gudbiyo macluumaadka qaab isku duuban oo leh waxyaabo muuqaal ah. Si kastaba ha noqotee, haddii lagu siiyo ikhtiyaar, ma ka aqrin doontaa 1000 erey oo qoraal ah, mise waxaad marto jaantus kooban oo muujinaya isla macluumaad?
Dadka badankood ayaa dooran lahaa kan dambe.
Sida laga soo xigtay dhawaan doorashada, 61% macaamiisha ayaa sheegay in shaxanka uu yahay qaabka ugu wax ku oolka badan ee haynta macluumaadka iyo barashada.
Muuqaalada firfircoon iyo sawirada loo adeegsaday shaxanka qoto dheer waxay aadaan waddo dheer si ay akhristayaasha u xiiseeyaan.
Marka, way cadahay in sawir-qaadistu ay tahay qaab awood badan oo muuqaal muuqaal ah leh.
Laakiin, sidee ayaad uga dhigeysaa taada mid ka dhex muuqata malaayiin kale oo daad ku soo rogaya internetka?
Waa kuwan talooyin ku caawin kara:
Ku Kooban Mawduuc
Hubso inaad diirada saareyso. Infographic infografi ah oo ay ku jiraan faahfaahino aad u tiro badan ayaa wareerin kara akhristaha.
Xogtaada macluumaadka ayaa laga yaabaa inay wax badan ka sii fiicnaato haddii aadan ku darin dhammaan xogta aad heli karto. Taabadalkeed, ujeexi diiraddaada hal mowduuc oo hubi inaad abuureysid shaxanka hareerahaas.
Waa kuwan tusaalaha muuqaalka muuqaalka oo kooban:
Infographics-ka waxaa loo malaynayaa inay ka weynaan doonaan sawirrada iyo jaantusyada caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, hubi inay yihiin cabir la maamuli karo iyo dherer. Haddii tan aan maskaxda lagu hayn, waxaad waayi kartaa akhristayaasha mustaqbalka.
Abuur Sawirro Qalab La'aan ah
Idinkuna ma waxaad doonaysaan inaad soo gudbisaan infographic ah in aad u saxmad badan. Had iyo jeer ku dar meelo ka caawin doona akhristayaasha inay si fudud ugu dhex socdaan macluumaadka.
Intaa waxaa sii dheer, hubi in xitaa cabbirka ugu yar ee font ee ku yaal boggaaga infographic ay fududahay in la akhriyo.
Mar alla markii aad dhammeysato sameynta sawir-gacmeed weyn, waxaad u gudbin kartaa boggag internet oo kala duwan. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad gaarto dhagaystayaal ballaadhan.
Istaraatiijiyadda # 2: Gaarsiinta Mawduucyada la shakhsiyeeyey
Macaamiisha waxay rabaan waxyaabaha sida gaarka ah shaqsiyadeed uga ah danahooda. Dhab ahaan, 91% macaamiisha waxay u badan tahay inay wax ka iibsadaan noocyo aqoonsan oo siiya iyaga dalabyo iyo talooyin la habeeyay.
kale Sahan 2018 ayaa shaaca ka qaaday in haddii waxyaabaha aan la qoondeynin, 42% macaamiisha ay xanaaqsan yihiin, 29% ka mid ahna ay u badan tahay inay wax iibsadaan.
Sawir loo maro SlideShare
Hal dariiqo oo lagu ogaado waxa dhagaystayaashaadu doonayaan ayaa ah iyada oo loo marayo dhegeysiga bulshada. Waxaa jira qalab badan halkaas oo kaa caawin kara inaad sidaa sameyso. Waxay kaa caawin doonaan inaad qiimeyso dareenka isticmaalayaashaada oo aad ogaato waxa ay ka qabaan adiga iyo tartamayaashaada.
Aynu haddaba eegno siyaabaha kala duwan ee aad shaqsi ahaan u shakhsiyeyn karto waxyaabaha aad ka kooban tahay.
Muuqaallo Muuqaal Dabadeed ah
Soo helitaanka waxa ku dhex jira abuurista wax soo saar waxay abuurtaa isku dhawaansho maskaxda dadka dhagaystayaasha ah. Adoo ku dhajinaya muuqaallo muuqaal muuqaal ah sida sawirro iyo fiidiyowyo baraha bulshada, waxaad ku siin kartaa dhagaystayaashaada dhuumaalaysi meheraddaada ah.
Sawir qaade fadhigiisu yahay Toronto, Anna, waxay sidaa ku sameysaa iyada oo adeegsata qaar ka mid ah qoraalladeeda Instagram.
Intaa waxaa dheer, astaamaha sida Instagram iyo Sheekooyinka Facebook sidoo kale waxay caddeyn karaan inay ka caawin karaan arrintan.
Abuur Mawduuc Maxalli ah
Kala-saaridda waxyaabaha muuqaalka ah kuma eka isticmaalka luqadda lagu hadlo. Adeegsiga tilmaamaha iyo tilmaamaha ku jira mawduucaaga ayaa ka caawin kara isticmaalayaasha inay isla markiiba ku xirmaan.
Istaraatijiyadaha deegaanka ee McDonald's ayaa caan ka ah adduunka oo dhan. Kaliya maaha inay sidan ku sameeyaan iyagoo bedelaya menuskooda, laakiin sidoo kale waxay u marayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin aragga.
Tusaale ahaan, McDonald's wuxuu macaamiisha Mareykanka ku sasabaa inay cunaan cuntadooda iyagoo la wadaagaya waxyaabaha ku habboon deegaanka. Dhawaan waxay wadaageen qoraal ku saabsan Maalinta Cheeseburger Qaranka si ay uga soo jiitaan dhagaystayaashooda Mareykanka.
Tusaale kale ayaa ah kii ololaha ee ay sameeyeen McDonald intii lagu guda jiray Sannadka Cusub ee Shiinaha 2016. Maaddaama ay tahay xilli ay dad badani u safraan guryahooda si ay u arkaan qoysaskooda, ololuhu wuxuu diiradda saaray qiimaha wadajirka iyo waqtiga qoyska.
Iyadoo loo marayo fiidiyowyo iyo sawirro, waxay soo bandhigtay nooc yar oo caruusad ah oo Ronald McDonald oo safar dheer ku tagaya gurigiisa.
image via Samee Digital
Si kooban, iyadoo loo adeegsanayo qaab shaqsiyeed, nuxurka muuqaalka ah ayaa kicin kara dareen xoog leh, isla markaana ka qayb qaadan kara isticmaalayaasha.
Istaraatiijiyadda # 3 Ku Daji Kaftan Mawduucaaga Muuqaalka ah
Ku duritaanka qosol ka mid ah waxyaabahaaga muuqaalka ah waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa sida dhagaystayaashaadu ula macaamilaan ganacsigaaga.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo tan waa iyada oo loo marayo memes. Iyagu way gaaban yihiin, la wada hadli karaa, oo kaftan ah sidoo kale. Bedel ahaan, waxaad isticmaali kartaa GIFs qosol badan iyo kartoonno ama qosollo majaajillo ah si aad uga qayb gasho dhagaystayaashaada.
Muuqaallo kaftan ah kuma mashquuli karaan oo keliya dhagaystayaashaada laakiin waxay kaa siin karaan nasasho aad loogu baahan yahay qoraalka.
Ku shubista waxyaabo madadaalo ah muuqaalkaaga kaliya ma siineyso astaantaada aqoonsi la jeclaan karo, laakiin sidoo kale waxay yareysaa heerarka kacsiga.
Tusaale ahaan, Matxafka Royal Ontario wuxuu had iyo jeer adeegsadaa memes si uu dhagaystayaashooda ugu soo jiito barta Instagram. Ogsoonow sida ay u isticmaaleen kuwii ugu dambeeyay Dolly Parton caqabad koontadooda Instagram.
image via Instagaraam
Intaa waxaa dheer, kaftan daruuri maahan inay ahaato mid qosol badan. Waxay noqon kartaa sawirrada eeyaha ama fiidiyowyada carruurta - wax kasta oo ka dhigaya dhagaystayaashaada dhoola caddeyn.
Ama waxaa laga yaabaa, waxyaabahaagu inay noqon karaan LABO maad iyo qurux badan. BarkBox, oo ah adeeg loogu talagalay alaabada eyga, ayaa tusaale fiican u ah. Waxay soo bandhigtaa sawirro qurux badan eeyaha waxayna ku dartaa kaftan iyaga oo gelinaya qoraallo qosol leh.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan la wareegin kaftanka, xaqiiji inay ku habboon tahay codkaaga iyo codkaaga. Intaa waxaa sii dheer, hubi inaadan shaqaalayn nabarro, roogow, ama kaftan aan habboonayn. Taasi waxay noqon kartaa mid wax soo saar u leh astaantaada.
Istaraatiijiyadda # 4: Adeegso Qalabka Tusmada Muuqaalka Saxda ah
Isbedelada joogtada ah iyo danaha isticmaalaha ayaa dhib ka dhigi kara istiraatiijiyaddaada muuqaalka ah. Taasi waa sababta ay tahay inaad uga fiirsato isticmaalka qalab taasi waxay kaa caawin kartaa inaad abuurto muuqaalo xiddigle ah isla markaana aad u weyneyso gaadhitaankooda baraha bulshada sidoo kale.
Shaqaalee qalabka sida Canva, Animaker, Google Charts, iMeme, iyo inbadan si aad ula timaado muuqaallo yaab leh.
Haddii aad si sax ah u isticmaasho awoodda nuxurka muuqaalka ah, waxay kaa caawin kartaa inaad abuurto hawlgelin ballaaran. Waa inaad tixgelisaa shakhsi ahaantaada muuqaalka muuqaalka ah si aad uga dhigto mid ku habboon dhagaystayaashaada.
Intaa waxaa sii dheer, waa inaad ku dartaa shaxanka qaab istiraatiijiyadeed ee muuqaalka ah, haddii aadan horey u sameyn. Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa in lagu shubo waxoogaa maad ah si ay uga dhigaan waxa ku jira ka-qayb-gal badan.
Ugu dambeyntiina, adeegso aaladda abuurista muuqaalka si aad kor ugu qaaddo ciyaartaada ugana faa'iideysato waxyaabahaaga muuqaal ahaanta ah.
Ma jiraan xeelado kale oo aad u isticmaasho inaad ku horumariso waxyaabahaaga muuqaal ah? Noo soo sheeg faallooyinka.
Tags: adobe tirakoobka waxyaabahasida loohagaajinta nuxurka bulshadawaxyaabaha ku koobanMacluumaadka Suuqgeyntaxasuusnoka kooban shakhsitirakoobka muuqaalka muuqaalka
Shane Barker waa la-taliye suuq-geyn digital ah muddo 15 sano ah iyadoo xoogga la saarayo Suuq-geynta Saameynta 5-tii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu ku takhasusay funnadaha iibka, taraafikada la beegsaday iyo beddelaadda websaydhka. Wuxuu la tashaday shirkadaha Fortune 500, Saameeyayaasha alaabada dhijitaalka ah, iyo tiro caan ah oo ka tirsan A-List.
Renderforest: Waqtiga-saxda ah Tafatirka Video-ga iyo Moodellada animation-ka ee khadka tooska ah
Ahmiyadda Waxtarka Iibinta